(भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण आम नेपालीको दैनिकी कष्टकर बनेको छ । चरम इन्धनको अभावले नेपालीको दैनिकी नै फेरिएको छ । इन्धन आपूर्ति सहज नहुँदा नेपालीको कष्टकर दैनिकीलाई सहज बनाउन सरकार गम्भीर रुपले चुकेको छ । भारतले नाकाबन्दी गरेको भन्दा पनि सरकारले जनताको समस्या समाधान गर्न नसकेकोमा जनता बढी आक्रोशित बनेका छन् । खाना पकाउने ग्यास लयागत पेट्रोलियम पदार्थको चरम अभावलाई सहज बनाउन सरकारको रणनीति चीनतर्फ सोझिएको छ तर अहिलेसम्म पनि भरपर्दो र ठोस योजना सरकारसँग छैन् । के चीनसँगको इन्धन आपूर्ति सहज छ वा यो पनि जनतालाई ढाँटने उपाय मात्र हुन जस्ता यावत प्रश्नहरु उब्जिएको छ । यी र यस्तै जिज्ञासाका साथ उपप्रधान तथा उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसँग देशको वर्तमान उर्जा संकट, यसको समाधान र दीर्घकालीन योजनाबारे अनलाइनकर्मी शिवहरि घिमिरेले गरेको कुराकानीः)
उर्जा क्षेत्रमा देखिएको वर्तमान संकटलाई कसरी लिनुभएको छ?
नेपाली समाजमा अहिले अस्तव्यस्ता सिर्जना भएको छ । ग्यासको अभावमा आम नेपालीको चुलो बल्न गाह्रो छ । इन्धन अभावले दैनिकी कष्टमय छ । वास्तवमा जनताले सदियौदेखि नै उर्जा संकट व्यहोर्दै आएका छन् । भारतको अघोषित नाकाबन्दीले गर्दा पर्याप्त मात्रामा सवारी साधन चल्न सकेका छैनन्, व्यवसायीहरुलाई कलकारखाना बन्द गरेर बस्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । विकास निर्माणको क्षेत्रमा पनि भयावह स्थिति निम्तिएको छ । नेपालमा उर्जा क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सदियौ देखि भने जस्तो गति लिन सकेको छैन् । उर्जा मन्त्रालयकै कुरा गर्ने हो भने १८ वर्ष देखि उर्जा संकट कम गर्नका लागि गृहकार्य हुँदै आइरहेको छ तर त्यसले ठोस गति लिन नसक्दा वार्षिक योजनाहरु फेल भइरहेको छ । यस्ता यावत कुरालाई ध्यानमा राख्दै उर्जा मन्त्रालयले हालै मात्र अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याएको छ ।
१८ वर्षमा पूरा हुन नसकेको योजना एक वर्षमै पूरा गर्न सक्ला र मन्त्रालयले ?
अवश्य पनि सक्छ, यो योजना पूरा गर्नका लागि नै हामीले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकाली योजना ल्याएका हौं । यसमा जलविद्युत मात्र छैन्, अन्य सौर्य उर्जा उत्पादनलाई पनि हामीले जोडेका छौ । भारतले गरेको नाकाबन्दीले गर्दा सबैको ध्यान उर्जा क्षेत्रमा गएको छ । यतिबेला हामीलाई पर्याप्त उर्जा श्रोत भएको भए घेरै जनताका चुलाहरु उर्जा मै केन्द्रित गर्न सक्थ्यौं होला तर त्यसो हुन सकेन । यी यस्ता विविध पक्षलाई ध्यानमा राख्दै यो योजना अघि सारेका छौ । मैले लेखेरै दिन्छु, मेरै नेतृत्वमा एक वर्ष भित्रमा नेपाल लोडसेडिङ मुक्त हुन्छ । विगतका कमी कमजोरीलाई बोध गर्दै नयाँ योजना ल्याएका हांै ।
नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त गर्न कति उर्जा उत्पादन गर्नु पर्ला?
१४ सय मेगावाट हुने हो भने नेपाल लोडसेडिङबाट पूर्ण रुपमा मुक्त हुन्छ । हाल हामीसँंग मोटामोटी रुपमा साढे ४ सय विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । उर्जा मन्त्रालयले उर्जा उत्पादनका क्षेत्रहरुलाई समेटेर १ वर्षमा लोडसेडिङ मुक्त गर्ने योजना अघि सारेको हो । जसअन्र्तगत, पिकिङ रन अफ द रिभरबाट १५० मेगावाट, पु्राना हाइड्रो पावर र ढल्केवर–मुज्जफरपुर योजनाबाट २ सय, भारतबाट १ सय, सोलारबाट २५ प्रतिशत, चुहावटबाट १० मेगावाट, सोलारबाट ३ सय मेगावाट, चमेलिया, माथिल्लो भोटेकोशी लगायतको मर्मतसम्हारबाट १ सय मेगाावाट गरी हामी लोडसेडिङ मुक्त हुन सक्छौं । सोलार उर्जा त्यति भरपर्दा मानिँदैन । करीब चार सय मेगावाट यसबाटै उत्पादन हुने भयो ।
तपाईंहरुले जलविद्युत आयोजनाहरुलाई किन प्राथमिकतामा राख्न नसकेको?
तपाईंले भनेको कुरा सहि हो । हामीले तत्कालीन स्थितिमा अन्य श्रोतलाई पनि जोडेका छौं तर अन्य क्षेत्रबाट उत्पादन भएको उर्जाको भर नहुने भएकाले एक वर्ष भित्रमा पूर्ण रुपमा जलविद्युतबाटै लोडसेडिङ मुक्त गराउँछौ । यो मेरो प्रतिबद्धता नै भयो । यसका लागि उर्जा मन्त्रालयले निरनतर अभ्यास पनि गरिरहेको छ । हामी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याएका हौं र यसै अनुसार नै काम गर्ने छौं ।
अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाको उद्देश्यबारे प्रष्ट्यादिनुस् न?
अल्पकालीन योजना अन्र्तगत सबै क्षेत्रका उर्जाहरुलाई प्रयोग गरेर लोडसेडिङ हटाउने, मध्यकालीन योजना अन्र्तगत भरपर्दो योजनाहरु विस्तार गर्दै जाने र दीर्घकालीन योजनामा भरपर्दो तवरले पूर्ण रुपमा जलविद्युत कै प्रयोगबाट लोडसेडिङ हटाउने र दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । फास्ट ट्र्याकमा गएर काम गर्नुप¥यो, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार नै काम गर्न उर्जा मन्त्रालय कटिबद्ध भएर अघि बढेको छ । प्रधानमन्त्रीले बोलिसक्नु भएको छ र यो वचनलार्ईम खेर जान दिन्न । हालै प्रधानमन्त्रीले पनि उर्जा संकटको नीति ल्याएर काम सुरु गर्ने भन्नु भएको छ । [top2]
उर्जा संकट लगाउँदा के हुन्छ ?
सरकारले उर्जा संकटको नीति ल्याउनुको मुख्य कारण एक वर्ष भित्रमा देशलाई लोडसेडिङ मुक्त गर्नु हो । अहिले उर्जा मन्त्रालयले पनि यो विषयमा गृहकार्य गरिरहेको छ । मलाई लाग्छ, सबैले सहयाग गर्ने हो भने यो सम्भव पनि छ । मैलै ग्यारेन्टी नै दिन्छु, नेपाल एक वर्ष भित्रमा पूर्ण रुपमै लोडसेडिङ मुक्त हुन्छ । तर केही योजनाहरु अलपत्र छन् । सिन्धुलीमा २ वटा ट्रान्समिटर लाइन जनताले रोकेका छन् । ढिलासुस्ती, चलखेल अनियमितता हटाएर सिधा रुपमा योजना सञ्चालन गर्नको लागि संकटकाल लगाएको हो । धेरै राजनीतिक नेताहरुको परम्परावादी सोचले गर्दा विकास निर्माणका कार्यले सोचेजस्तो गति लिन सकेको छैन । उर्जा मन्त्रालयकै कुरा गर्ने हो भने पनि ठिक यस्तै छ,
अब जनताले तपाईलाई कसरी विश्वास गर्ने ?
विगतमा के के भए त्यो बेलाको परिस्थिति नै त्यस्तै थियो होला । तर अहिलेको यो परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै उर्जा मन्त्रालयले यस्तो योजना अघि सारेको हो । नाकाबन्दीको कारणले सबैको ध्यान उर्जा क्षेत्रमा गएको छ । अहिले धेरै मानिसहरुको जीवन असहज परिस्थितिमा गुज्रिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकाले पनि जनताको आवश्यकतलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नु जरुरी छ । तर जनताको कर पसिना खाएर सत्तामा रहने र पैसाको लागि राजनीति गर्नेलाई जनता र सरकारले निरुत्साहित पार्नु पर्छ । राजनीतिलाई दुरुपयोग नगरौ तटस्थ भएर काम गर्ने हो भने सबैको भलो हुन्छ ।
तपाईले एक वर्षमा लोडसेडिङ मुक्त त गर्छु भन्नुभयो तर त्यसको लागि श्रोत साधन पर्याप्त छ ?
हामीले हाम्रै श्रोत साधनबाट योजना सफल पार्ने उद्देश्य लिएका छौ । धेरैजसो साधनहरु हामीसंँगै छन् र केही साधनहरु अन्य देशहरबाट खरीद गरी एक वर्षमा लोडसेडिङ मुक्त गर्नु लक्ष्य लिएका छौं । यस्तै, योजनाहरु सरकारले गर्ने की निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयमा छलफल हुन बाँकी छ । यो टुंगो पनि चाँडै नै लाग्ने छ ।